परदेशीलाई यो कस्तो विपत्ती :घर फर्कंदा न स्वास्नी, न सम्पत्ति — Hamro Sanchar
राती लजमा मलाई निद्रा परेन। मलाई त्यसरी माया गर्ने श्रीमतीले कस्तो रुखो व्यवहार गरेकी भन्ने लागेर मनमा छटपटी चलिरह्यो। त्यत्तिका समयपछि विदेशबाट आएको लोग्नेलाई काठमाडौंमा छोडेर पैस्ँँ र सरसामान मात्रै लिएर कसरी घर फर्कन सकेको? अनि २/४ दिनका लागि पनि घर जान नदिएर फेरि विदेश जानु भनी कसरी भन्न सकेको? होइन यसमा कुनै रहस्य त पक्कै होला यस्ता तर्कना रातभर चल्यो। भोलिपल्ट उज्यालो भएपछिचाहिँ ‘मिल्छ भने फेरि बाहिरका लागि किन ट्राई नगर्ने त?’
रवीन्द्र भट्टराई प्रकाशित : २०७४/९/२९ गते